တစ်ဦးလေ့လာမှု Partner ဖူးဖို့အကြောင်းပြချက်
ကျောင်းသားများ & မိဘများအဘို့ လေ့လာမှုနည်းလမ်းများ
by ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Fleming က
ပစ်မှတ်အပေါ်နေဖို့နဲ့ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်ဝင်ငွေမှတစ်ဦးကအကြီးအလမ်းကောင်းတစ်ခုလေ့လာမှုမိတ်ဖက်အတူတက်တွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသငျ့ကြောငျးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်အကြောင်းကိုအလေးအနက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီကသင်၏လေ့လာမှုအချိန်အများဆုံးစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်မည်သို့အကျိုးရရှိနိုင်သလဲ
လေ့လာမှုတစ်ခုမိတ်ဖက်သင်တစ်ဦးကြောင့်နေ့စွဲဒါမှမဟုတ်စာမေးပွဲများ၏ရက်စွဲကိုမှတ်မိကူညီပေးပါမည်။ အခြားစမ်းသပ်မှုဘယ်တော့မှမေ့! ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကိုသို့မဟုတ်စက္ကူကြောင့်အခါသင့်ရဲ့လေ့လာမှုဖက်နှင့်သင်၏နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဝေမျှမယ်ပြက္ခဒိန်များသိကြပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့လေ့လာမှုမိတ်ဖက်သင်နှင့်အတူစာလုံးကတ်ဝေမျှပြီးစမ်းသပ်မှုမပြုလုပ်မီသင်ကမေးခွန်းတွေထုတ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စက္ကူကတ်များ ဖန်တီး. လေ့လာသို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့အထိဖြည့်ဆည်း အွန်လိုင်းစာလုံးကတ် အတူတူ။
နှစ်ဦးကဦးခေါင်းတစျခုထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လေ့လာမှု partner ၏ထင်စေခြင်းငှါ အလေ့အကျင့်အက်ဆေးမေးခွန်းများကို သင်တို့တွင်အထင်မပြုခဲ့ကြောင်း။
လေ့လာမှုမိတ်ဖက်စာတမ်းများနှင့်ပြောင်းနိုင်ပါသည် တစ်ဦးချင်းစီကတခြား Pre-တန်း တာဝန်တွေအတွက်လှည့်ခင်။ Proofread အတူတူနှင့်အသင်တို့၏အကြံအစည်နှင့်အတွေးအခေါ်များမျှဝေပါ။
သင်သည်သင်၏စက္ကူကြောင့်အခါနေ့၌နေမကောင်း get လျှင်တစ်ဦးကလေ့လာမှုဖက်သင့်ရဲ့နောက်ကျောရှိနိုင်ပါသည်။ ကောက်များနှင့်အရေးပေါ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားများအတွက်စာတမ်းများအတွက်ဖွင့်ဖို့ရှေ့ဆက်အချိန်စီစဉ်ထားပါ။
လေ့လာမှုတစ်ခုအဖက်သင်သည်မကျင့်သောသူအချို့နည်းလမ်းများသို့မဟုတ်ပြဿနာများကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအပြန်၌သင်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တချို့ပြဿနာများရှင်းပြနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအကြီးအ Trade-off ပဲ!
သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုသင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်မည်အကြောင်း သုတေသနကျွမ်းကျင်မှု ။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်တွေ့ဆုံရန် စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုအတူတကွသုံးစွဲဖို့သင်ယူ - ပြီးတော့သင်ကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားထွက်ကူညီရန်ကိုယ်သိသောအရာကိုမျှဝေပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အခြားသင်ယူမှုဟာစင်ပေါ်အပေါ်စာအုပ်တွေကိုရှာဖွေနေချိန်မှာ databases ကိုရှာဖွေသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏အားသာချက်မျှဝေမှအကျိုးနိုင်ပါတယ်။ အခြား၌ရှိသကဲ့သို့, နံပါတ်နှင့်အတူ သာ. ကောင်း၏စဉ်တစ်ခုမှာ, သဒ္ဒါနှင့်အတူပိုကောင်းဖြစ်နိုင်သည် စာရင်းဇယားရှာတွေ့ ထားတဲ့များအတွက်ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံ အငြင်းအခုံအက်ဆေး ။
လေ့လာမှုမိတ်ဖက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်များအတွက်အလားအလာလျှော့ချ အခြိနျဆှဲ ။
တစ်ဂဏန်းတွက်စက်, အဘိဓါန်, ရောင်စုံခဲတံ, ဒါမှမဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်စက္ကူနဲ့တူ - သငျအရေးကြီးသော tools တွေကိုမေ့လျော့နေလျှင်လေ့လာမှုမိတ်ဖက်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဟာနှစ်ဦးစလုံးကျောင်းသားများအတွက်အကျိုးရှိဖြစ်, ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းရန်အဘို့အကအရေးကြီးပါတယ်သတိရသင့်တယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနှင့်အတူမိတ်ဖက်အထိအသိမပေလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့လေ့လာမှုမိတ်ဖက်သင်နှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖြည့်သူတစ်ဦးဖြစ်သင့်သည်။
ဝေါဟာရကြွက်သား Build 17 ကိုယ်စားလှယ်များ
Google Docs ကိုသုံးပြီး Group မှရေးသားစီမံကိန်း
သင့်ရဲ့စာပေလယ်နှင့်နောက်ဆုံးတစ်ခု Concept ကိုမြေပုံသုံးပါ
သင့်ရဲ့စမ်းသပ် ACE မှ 3-ခြေလှမ်းများ
လက်ဝဲဦးနှောက် Dominant ကျောင်းသားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
ရှည်လျားက Short သရအက္ခရာအသံ
Period table တွင်ဖှဲ့စညျးယနေ့တွင်ဘယ်လိုရှိပါသလား?
Google Maps ကိုအတူသင့်ရဲ့မျိုးရိုးပုံဖော်
(23-5 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းသန်း) ကို Miocene ယုဂ်
Tapinosis (အပြောအဆိုအမည်-Calling မှ)
အဆိုပါစွပ်စွဲချက်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုယူဒါကဂျာမန် preposition ဘာတွေလဲ
Putter အလျား: သင်အဘို့အညာဘက်ဆိုတာဘာလဲ?
ကောလိပ်စာဖတ်ခြင်းနှင့်အတူ Up ကိုသိမ်းဆည်းထားပါရန်ကဘယ်လို
သူတို့ကသင်ပေးအဘယ်ကြောင့်ဆရာများသတိပေးဒါက 8, Movies
ယနေ့တွင်အတွက်လုံလောက်သော - မြည်တမ်းစကား 3: 22-24
Quotes '' သူတို့ရဲ့မျက်လုံးဘုရားသခငျသညျအကဲခတ်ခဲ့ကြတဲ့ ''
ဘယ်လိုဖွင့်ပါ, G ဖို့ Tune သင့်ဂစ်တာရန်
ကားမောင်းသူပညာရေး - DMV - အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူအဘို့အ Key ကိုဝေါဟာရ